Nha roba na akara ịbịaru ọrụ nke ebe egwuregwu dị iche-News-Topflor China nwere oke
Echiche:53 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Oge opupu ihe ubi na-abịa, oge kachasị elu maka egwuregwu na ahụike na-abịa. Owuwu na ntinye nke ama egwuregwu di iche-iche emeela ka o ju oso. Tengfang egwuregwu ala gluu nwekwara ike mma chebe ndị na-eme ozu. Enwekwara nkọwa na ahịrị na ama egwuregwu dị iche iche. Jighi oke ụkpụrụ.
Nkata bọọlụ bọọlụ bọọlụ:
1. Nha nke ebe a na-egwuri egwu n'ụlọ ikpe, mita 28x15 (ewepu obosara akara), uko ụlọ ma ọ bụ ihe mgbochi kachasị dị ala abụghị ihe na-erughị mita 7;
2. Onweghi ndị na-ege ntị, bọọdụ mkpọsa ma ọ bụ ihe mgbochi ndị ọzọ dị n’ime mita abụọ n’ahịrị. A na-akpọ akara ogologo ahụ akara n'akụkụ, ya bụ, eriri 2-mita, na akara dị mkpirikpi a na-akpọ akara njedebe, ya bụ, 28-mita, na akara akara bụ 15cm.
3. Gburugburu etiti, na radius nke 1.8 mita, na-agbakọ site na nsọtụ mpụta nke gburugburu. Ogige dị n'ihu na azụ azụ azụ bụ otu, na isi abụọ nke eriri etiti gbatịrị site na 15cm.
Nkebi nke 4 na 3, ya na nkwụsị nke mgbanaka nke mgbanaka ahụ dị ka etiti nke gburugburu na 6.25 mita dị ka okirikiri, see ọkara okirikiri aak, na etiti dị n'akụkụ akara ahụ dị 1.575 mita site na etiti nke okirikiri.
5. Amachibidoro mpaghara, free otutu akara
(1) Detuo ahịrị abụọ site na nsọtụ abụọ nke akara ntụgharị n'efu ruo mita atọ site na etiti nke akara njedebe, (ihe niile atụpụtara site na mpụga ahịrị) a na-akpọ mpaghara amachibidoro.
(2) Mpaghara ikpe bụ mpaghara amachibidoro gbakwunyere mpaghara semicircle nke dị na akara ntụgharị efu na 1.8 mita na okirikiri. A ga-eji akara akara kụrụ ọkara okirikiri dị na mpaghara amachibidoro. Akara ntụgharị efu bụ mita 5.8 site na nsọtụ mpụga nke njedebe njedebe na mita 3.6 n'ogologo.
(3) Ahịrị nke mbụ dị mita 1.75 site na nsọtụ ime nke akara njedebe, obosara nke ọnọdụ mbụ bụ mita 0.85, ebe na-anọpụ iche nke mita 0.3 na-esote ya. Ọnọdụ ebe 2 na 3 dị mita 0.85 na akara ọnụọgụ dị elu bụ mita 0.1. 0.05 mita n'obosara, na-adabere n'akụkụ akụkụ nke ebe ntaramahụhụ.
6. Mpaghara nchekwa, n'ozuzu mita 2 n'akụkụ na 1 mita na njedebe.
Ala roba nke ogige volleyball:
1. Ebe a na-anọ eme ihe, mpaghara asọmpi ahụ bụ akụkụ anọ 18x9, ma ọ dịkarịa ala 3 mita ogologo na ebe ndị na-enweghị ihe mgbochi na gburugburu ya, site na ala ruo elu nke mita 7 na-enweghị ihe mgbochi. Ndị otu bọọlụ volleyball mba ofesi nwere opekata mpe mita 5 na mpụga mpaghara enweghị mgbochi, opekata mpe 8 mita na mpụga akara njedebe, opekata mpe mita 12.5 dị elu karịa mpaghara asọmpi ahụ, yana mpaghara nwere ohere 3x3 mita na mpụga mpaghara nchekwa.
2. Agba nke ala ga-enwerịrị ọkụ, ókèala nke ebe egwuregwu na-acha ọcha, ebe egwuregwu na mpaghara enweghị ihe mgbochi bụ agba dị iche iche.
3. Egwuregwu akara obosara bụ 5cm, 18x9 gụnyere obosara akara.
Ala nke ala badminton ụlọ ikpe:
1. Ogige Badminton, akụkụ anọ akụkụ anọ obosara 4cm, agba ọcha ma ọ bụ odo; size 13.4x6.1m okpukpu abụọ; 13.4x5.18m;
2. Nwalee mpaghara 4 nke ọsọ ọsọ bọl, akara 4x4, see na nsọtụ dị n'akụkụ aka nri nke otu ọrụ, 530cm na 950cm site na nsọtụ nke akara njedebe.
Ground roba size:
Lọ tennis bụ mpaghara akụkụ anọ ya na ogologo ya dị mita 36.58 na obosara nke 18.29 mita. Ogige egwuregwu ahụ dị mita 23.77 n'ogologo na mita 10.97 n'obosara, ogige ahụ gbara ogige 4 mita dị elu iji kwado nchịkọta bọl. Ekwesịrị iji oriọna 8 1000-watt kesaa ọkụ egwuregwu ahụ n'akụkụ abụọ nke ụlọ ikpe ahụ, ọkụ ahụ nwere ike iru 350 LUX, yana ụzọ ntanetịime egwuregwu tennis. Etiti ụgbụ a dị mita 0.914. Ma onye na-akwagharị mmiri na ụgbụ ikuku ikuku kwesịrị ịbụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ụlọ ịgba tennis n'èzí.
Olee otú iji wepụ mmapụta gluu na ịkwanyere plastic n'ala?